नयाँ दैनिक | युवाको नेतृत्व चुक्यो : माधव वास्तोला युवाको नेतृत्व चुक्यो : माधव वास्तोला – नयाँ दैनिक
युवाको नेतृत्व चुक्यो : माधव वास्तोला
‘मलाई विश्वास छ–जनताको बहुदलीय जनवाद नै महाधिवेशनबाट पारित हुन्छ’
पुस २१, काठमाडौँ । युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष माधव बास्तोलाले राजनैतिक र वैचारिक काममा युवा नेतृत्व चुकेको बताएका छन् । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा युवाहरुले सरकारलाई सहयोग गर्ने र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा युवा संघ र वाइसिएलको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरु निस्क्रिय भएकोमा उनले असन्तुष्टि समेत प्रकट गरे । नयाँ दैनिकसँग छलफल गर्दै युवा नेता बास्तोलाले भने, ‘युवा नेतृत्वले जति गर्नुपथ्र्यो, जति सकिन्थ्यो, त्यति गरेन र चुक्यो ।’
मदन भण्डारी फाउन्डेसन, कास्कीका अध्यक्ष समेत रहेका बास्तोलाले यतिबेला पार्टीमा युवाहरुको सक्रिय भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए । फाउन्डेसनको स्थापना गरेर उनले पोखराबाट बहस थालिसकेका छन् । गत महिना पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको बीचमा उनले वृहत वैचारिक बहस गरेका थिए । ‘जनताको वहुदलीय जनवाद’को औचित्य झनै बढेको बताउँदै उनले जननेता मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिएको वैचारिक योगदान अतुलनिय भएको दावी गरे । फाउन्डेसनबारे उनले भने, ‘यो विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । यसले मदन भण्डारीको विचारलाई कार्यकर्ता र जनतासम्म पुर्याउँछ ।’
नेता बास्तोलासँगको प्रश्नोत्तर :
दुई युवा संगठनबीचको एकता कहिलेसम्ममा टुङ्गिन्छ ?
कार्यदल बनेको छ । यही महिनाभित्रैमा टुङ्गिएला । जति ढिला भयो सांगठानिक रुपमा त्यति घाटा हुन्छ ।
युवा नेताहरु ठूला नेताको हनुमान मात्रै भए भन्ने आरोप छ नि ?
हो, हामीभित्र त्यो दासत्व हुर्कँदैछ । समाजमा जे छ, त्यो संगठनमा पनि देखिनु स्वभाविक नै हो । तर अब हामीले कुनै नेता विशेषभन्दा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ । हामी कुनै व्यक्ति विशेषका निजी सम्पत्ति होइनौँ । हाम्रो आफ्नैपन छ र हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । हामी सामन्तवादका विरुद्ध लडेका हौँ, नयाँ सामन्तको पक्षमा हुने त कुरै भएन । कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता झन् व्यक्तिको पछि दगुर्नु हुँदै हुँदैन । दगुरेका साथीलाई रोकिन र दुगुर्न छोड्न म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु ।
जनताको वहुदलीय जनवाद कि एक्काइसौँ सताव्दिको जनवाद ?
तत्कालिन एमालेको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका साथीले जवज नै भन्नुहुन्छ । जवज मानेरै हामी एमाले बनेको हो । माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरु एक्काइसौँ सताव्दिको पक्षमा हुनु पनि स्वभाविक नै भैहाल्यो । तर, यो वैचारिक वहस हामी हरेक व्यक्ति–व्यक्ति, समूह–समूहमा गर्दै जान्छौँ र महाधिवेशनमा निर्णयमा पुग्छौँ । मलाई विश्वास छ, जनताको वहुदलीय जनवाद नै पारित हुन्छ । यो हाम्रो तहमा भन्दा माथिल्लो तहमै टुङ्गिने विषय हो ।
ओली, प्रचण्ड र नेपालपछिको सम्भावित नेता को देख्नुहुन्छ ?
नेता कसैले बनाइदिने वा कसैको मनोगत चाहनाले मात्रै हुने कुरा होइन । समय र परिस्थितिको परिणाम हो नेता भनेको । अहिलेको समय र यो परिस्थितिको जसले राम्रोसँग अगुवाई गर्न सक्छ, उही नेता बन्छ ।
अहिले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकता भएर नयाँ पार्टी बनेको छ । आ–आफ्नै पृष्ठभूमि र मनोविज्ञान छन् । यो फरक पृष्ठभूमि र मनोविज्ञानलाई बुझ्न र बुझाउन सक्ने व्यक्ति नै नेता बन्ने हो । अहिलेको युगमा सरल र पारदर्शी जीवन भएको, जनता र कार्यकर्ताको मन जित्न सक्ने र वैचारिक रुपमा प्रष्ट पात्रले नै नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्छ । हाम्रो पार्टीभित्र ‘एक से एक’ नेता छन्, यो नै भनेर अहिले भनिहाल्ने बेला भएको छैन । तर म भन्छु, उमेर र विचारले युवाहरु नेतृत्वमा आउनुपर्छ ।
सरकार विवादमा छ, तपाईँहरु के गरेर बस्नुभाछ ?
सरकार विवादमा छ त प्रतिपक्षीले भन्ने कुरा हो । कमजोरी नै भएनन् त म पनि भन्दिनँ । तर सरकारको परिणाम हेरिहाल्ने बेला भएको छैन । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले काम गरिहाल्नुहुन्छ, हामी त रमिता हेरेर बसे हुन्छझैँ गरेका छन् जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताहरु ।
अहिलेको जनवर्गीय संगठनका नेतृत्वमा रहेका साथीहरु लामो दौडपछि थाकेर चौतारीमा बसेजस्तो लाग्छ । अहिले पार्टीले तय गरेका विषय धेरै छन् । सरकारले गरेका राम्रा काम धेरै छन्, कमजोरी पनि नभएका होइनन् । तर राम्रा कामको प्रचार र कमजोरीको समीक्षा र खबरदारी गर्नुपर्ने हो, भएको छैन । अहिले बहसमा लानुपर्ने विषय धेरै छन् । जस्तैः कस्तो खालको समाजवाद हो हामीले चाहेको ? संगठनात्मक प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने ? कार्यकर्ता व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? समृद्धिका आधारहरु के के हुन् ? सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल कसरी सम्भव हुन्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत विभिन्न क्षेत्रका समस्या के हुन् ? हल गर्ने कसरी हो ?
सरकार हाम्रो छ, हामीले उठाएका मुद्दा छन्, त्यो नेतालाई नै पत्तो छैन । हाम्रा युवा नेता नै सिँहदरबार र मन्त्री तथा नेताको क्वार्टरमा हराएका छन् ।
यस्तो युवा नेतृत्वबाट के आश गर्नुहुन्छ त ?
मलाई आशा छैन । परनिर्भरताको मानसिकताले केही गर्न सकिँदैन । अब यस्तै हो भने राजनीतिमा नयाँ युवा आउनेवाला छन् र आउनुपर्छ । माथिबाट आउला र लाउँला–खाउँला भनेर बस्यो भने देशमा केही हुनेवाला छैन । हामी युवाहरुको बीचमा बहसमै छौँ ।